Princess Cruises Australia: Haichisiri kuenda pasi pasi pegore rino
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Princess Cruises Australia: Haichisiri kuenda pasi pasi pegore rino
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kurwisa • nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Princess Cruises achangobva kuzivisa kudzimwa kwemazororo eAustralia echikepe kusvika Zvita wegore rino. Izvi zvinouya mushure mekufamba kwakawanda kwakawanda kare kwaitofanira kumiswa.
Vashanyi vakavakirwa parwendo rwakadzimwa, vanozoendeswa kune imwe yakaenzana cruise muna 2022.
Imwe sarudzo vashanyi vane yekutora yemberi cruise kiredhiti yakaenzana ne100 muzana yebhazi rebhadharo rakabhadharwa pamwe nebhonasi yekuwedzera isingadzoreke ye10 muzana yemari yacho.
Chero ani zvake akachengetera, anofanira kukumbira kudzorerwa kana makiredhiti muna Chikunguru 31, 2021.
Rwendo rwekufambisa ngarava rwakati nekuda kwekuenderera mberi kwekusava nechokwadi nezvenguva yekutangazve kwemazororo echikepe mudunhu iri, Princess ari kudzima zvikepe mukati nekunze kweAustralia kusvika Zvita 19, 2021.
Kune vashanyi vakavakirwa parwendo rwakadzimwa, Princess achaendesa vashanyi kune yakaenzana cruise muna 2022. Iyo cruise line yakati iyo rebooking maitiro ayo achadzivirira vashanyi '2021 mari pane yavo yekutsiva cruise. Neimwe nzira, vashanyi vanogona kusarudza ramangwana cruise kiredhiti (FCC) yakaenzana ne100 muzana yebhazi rebhazi rakabhadharwa pamwe nebhonasi yekuwedzera isingadzoreke FCC yakaenzana ne10 muzana yemari yechikepe yakabhadharwa (mashoma US $ 25) kana kudzoreredzwa kuzere kwepakutanga. fomu yekubhadhara.
Zvikumbiro zvinofanirwa kugamuchirwa kuburikidza fomu repamhepo by Chikunguru 31, 2021 kana vaenzi vanozogashira iyo FCC sarudzo. FCCs inogona kushandiswa pane chero rwendo rwekufambisa uye kubhururuka muna Zvita 31, 2022.
Ngarava dzinogona kuverengerwa kuburikidza neyehunyanzvi yekufambisa chipangamazano, kana nekufona 1-800-PRINCESS
(1-800-774-6237), kana nekushanya webhusaiti yekambani.
Princess Cruises akataura izvi pawebhusaiti yake:
Kufanana nematunhu mazhinji ehupenyu, kufamba kwakarohwa zvakanyanya nezviitiko zvichangobva kuitika. Zviri pamoyo unorema kuti Princess Cruises yaita danho rakaomesesa rekumbomisa zvishande zvengarava zvepasi rose. Tinoziva kuti wanga uchitarisira kufamba nechikepe nesu, uye tinokumbira ruregerero uye tinogovana mukusuwa kwako pamusoro pekukanzurwa uku. Iwe haufanire kutora chero chiito kuti ugamuchire default muripo. Iwe unogona kutsvaga ruzivo rwemubhadharo wako nekudzvanya iyi link inoenderana neyako seiri zuva pazasi.
Mavhiki mashoma apfuura, Princess Cruises yakanga yazivisa kuti kutanga pakati paGunyana 25 naNovember 28, 2021, ngarava dziri mungarava sere dzePrincess Medallion Kirasi dzinotora zvakare vashanyi kuCaribbean, Panama Canal, Mexico, Hawaii, neCalifornia Coast.
Kune yakazara runyorwa rwekare-rwakanzurwa Princess Cruise nzendo, tinya pano.